Aluminum Louver Panel, Stainless Steel Keteni Wall, Glass Wall Systems - Altop
Stainless Simbi Series
Keteni rusvingo / Window rusvingo & Door & Window
Steel mamiriro Series
Chinese Mainland purojekiti
Middle East purojekiti
Southeast Asia purojekiti
Hong Kong neMacao mapurojekiti
Innovation sayenzi & technology Leading remangwana
Pamwe kukurumidza kukura okuvaka musika dzakawanda, zvinoda vanhu kuti chivakwa simbi zvinhu zvinogadzirwa vari kuwedzera zuva nezuva. Kusangana musika zvinoda uye zvinoenderana musika yokurera, Altop France Co., Ltd. akaberekwa aine pfungwa "kuva noruzivo, nyanzvi uye nevamwe kuvaka hurongwa kusangana basa Provider". boka redu, kusanganisa R & D, magadzirirwo, kugadzira, rokutengesa uye kugadzwa rimwe, Rakakwanira pakupa chete-kumisa basa rokufukidza simba-rinoponesa keteni rusvingo mahwindo uye madhoo, aruminiyamu zvigadzirwa, Stainless simbi zvigadzirwa, keteni rusvingo simbi zvivako uye nenhumbi pamwe high- Tech kugutsikana.
About pakutsvakurudza uye kukura
Ipai vatengi vane nzwisisika uye kwakakwana indasitiri mhinduro uye hwokugadzira rutsigiro pashure-Sales, uye uite zvakanangwa tsvakurudza uye kukura kuti vanosangana vatengi zvinodiwa.
About purojekiti patani
In-Kunyatsoongorora chirongwa, ne "fashoni, chikumbiro, inogona kuenderera mberi, vagari" sezvo zvepaTV, pakusanganisirawo ichangoburwa yazvino kugadzira pfungwa.
Kugadzirwa About chigadzirwa
Tine fekitari anenge 40.000 mativi metres, vakapakata siyana yemhando kudzora michina kusanganiswa uye spraying kugadzirwa mitsetse, vakanyatsodzidziswa nyanzvi kugadzirwa chikwata, yakaoma unhu kuzvidzora zvaanoda muitiro kugadzirwa, rokuongorora uye chokufambisa.
About chigadzirwa okutengesa
Kune vazhinji chigadzirwa & basa nyaya kuMiddle East, Australia, uye North America, Southeast Asia nedzimwe nyika uye kumatunhu. Ticharamba kupaza nepakati uye mukuru-mugumo pamusika nzvimbo mikuru kumatunhu nenyika.
Company pamwe tsvakurudza uye kukura, magadzirirwo, kugadzira, rokutengesa, kugadzwa.
Makore anopfuura gumi indasitiri ruzivo.
Welcome to nokunyora magwaro kuMudzidzisi mashoko, isu kukutumirai mashoko ichifarirwa mailbox wako.
Technical Rutsigiro: Globalso
Stainless Steel Hollow Ball Sculpture , Stainless Steel Keteni Wall, Stainless Steel Glass Keteni Wall , Stainless Steel Sphere Sculpture ,